API muxuu u taagan yahay? Iyo Soo gaabinta Kale: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
Khamiista, Sebtember 24, 2015 Jimco, Diisambar 8, 2017 Douglas Karr
Markaad adeegsaneyso biraawsar, biraawsarkaaga ayaa codsi ka helaya macaamiisha macaamiisha isla markaana adeegu wuxuu soo celinayaa feylasha uu biraawsarkaagu isku soo uruuriyo isla markaana ku soo bandhigo bog. Laakiin ka waran haddii aad dooneysid kaliya in server-kaaga ama boggaaga uu la hadlo server kale? Tani waxay kaa dooneysaa inaad barnaamij u sameysato API. API muxuu u taagan yahay? API waa soo gaabinta Codsiga Barnaamijyada Codsiga. API waa nidaamyo joogto ah,